ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသိန်းဆွေ၊ ဂျပန်နိုင်ငံ၊ တရားရေးဝန်ကြီး H.E. Ms. MORI Masako ဦးဆောင်သောကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ ‹ အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသိန်းဆွေ၊ ဂျပန်နိုင်ငံ၊ တရားရေးဝန်ကြီး H.E. Ms. MORI Masako ဦးဆောင်သောကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
နေပြည်တော် ဒီဇင်ဘာ ၁၁ ရက်
အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသိန်းဆွေ သည် ဂျပန်နိုင်ငံ၊ တရားရေးဝန်ကြီး H.E.Ms. MORI Masako ဦးဆောင်သော ကိုယ် စားလှယ်အဖွဲ့ ယနေ့နေ့လည် ၁၃:၀၀ နာရီအချိန်တွင် နေပြည်တော်ရှိ အဆိုပါဝန်ကြီးဌာန၊ အစည်း အဝေးခန်းမတွင် လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် နှစ်နိုင်ငံချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုကိုရှေးရှုပြီး မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်ကြ သည့် ဂျပန်နိုင်ငံသားခရီးသွားများအား Visa ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုထားသည့် ကိစ္စများ၊ ဂျပန်နိုင်ငံသို့ မြန်မာနိုင်ငံမှ ကျွမ်းကျင်လုပ်သားများ စေလွှတ်နိုင်ရေးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံမှ ပြည်ပအလုပ်အကိုင် အေဂျင်စီ(၃၄)ခုအားခွင့်ပြုပေးထားသည့်ကိစ္စရပ်များနှင့်ပတ်သက်၍လည်းကောင်း၊ လက်ရှိစစ်ဆေး ဆောင်ရွက်နေသည့် ဟိုတယ်လုပ်ငန်းအပြင် အခြားလုပ်ငန်းများအတွက် စာမေးပွဲကျင်းပပြုလုပ် မည့်အခြေအနေများ၊ ထိုသို့ဂျပန်နိုင်ငံမှ မြန်မာလုပ်သားများအား လာရောက်စစ်ဆေးမည့် အခြေ အနေများနှင့်ပတ်သက်၍ ဝန်ကြီးဌာနမှပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးမည့်လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်ပတ်သက်၍ လည်းကောင်း၊ အလုပ်ခေါ်စာ (Demand Latter) များနှင့်ပတ်သက်၍ ဂျပန်နိုင်ငံတရားရေးဌာနမှ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံဘက်မှ ချမှတ်ထားသည့် လုပ်ငန်းစဉ်များဖြေလျော့ပေးမည့် အခြေအနေများနှင့် ပတ်သက်၍လည်းကောင်း၊ အေဂျင်စီများမှတင်ပြလာသည့် အလုပ်ခေါ်စာ (Demand Latter) များ မှန်ကန်မှု ရှိ/မရှိ စိစစ်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်များအား ဂျပန်နိုင်ငံရှိမြန်မာသံရုံး၏ အကူအညီဖြင့် ဆောင်ရွက်နေသည့် အခြေအနေများနှင့်ပတ်သက်၍လည်းကောင်း၊ မြန်မာလုပ်သား များအားဂျပန်နိုင်ငံဘက်မှ သတ်မှတ်ထားသည့် ကျွမ်းကျင်မှုအရည်အချင်းပြည့်မီရေးနှင့် ဂျပန်နိုင်ငံ သို့သွားရောက်သည့်အခါ ဂျပန်နိုင်ငံ၏ တည်ဆဲဥပဒေများအား တိတိကျကျလိုက်နာ ဆောင်ရွက်ရေးနှင့် အလုပ်ရှင်၏အကျိုးစီးပွားဖော်ဆောင်နိုင်ရေး ဂျပန်-မြန်မာ ချစ်ကြည်ရေး ပုံရိပ် မကျဆင်း စေရန် ပြုမူနေထိုင်နိုင်ရေးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံမှ အလုပ်သမားများအား မှာကြားစေလွှတ်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်ပတ်သက်၍လည်းကောင်း၊ ဂျပန်နိုင်ငံအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံမှခွင့်ပြုထားသည့် အေဂျင်စီ (၃၄)ခု၏ အချက်အလက်များအား ဂျပန်နိုင်ငံတရားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ အသိအမှတ်ပြုပြီး လိုအပ်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်များအား ဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် အခြေအနေများနှင့် ပတ်သက်၍လည်းကောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံနှင့်ဂျပန်နိုင်ငံတို့အကြား ကျွမ်းကျင်လုပ်သားနေထိုင်ခွင့်ပုံစံဖြင့် နိုင်ငံသားလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဆိုင်ရာစနစ်အားစနစ်တကျလည်ပတ်ဆောင်ရွက်မှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ သတင်းအချက်အလက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတွက် အခြေခံမူဘောင်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုစာချွန်လွှာ (MoC) အား ၂၈-၃-၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် ဂျပန်နိုင်ငံရှိ လုပ်ငန်းနယ်ပယ် ၁၄ မျိုး အတွက် လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပြီး ထိုလုပ်ငန်းနယ်ပယ်များတွင် မြန်မာနိုင်ငံမှကျွမ်းကျင်လုပ်သားများ အလုပ်ရရှိနိုင်မှု အခြေအနေများနှင့် ပတ်သက်၍ လည်းကောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံမှ ဂျပန်နိုင်ငံသို့ သွားရောက် အလုပ်လုပ်ကိုင်လိုသူ မြန်မာအလုပ်သမားများ များပြားသည့်အတွက် အချို့အေဂျင်စီ များမှလိမ်လည်မှုဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါသဖြင့် နှစ်နိုင်ငံချစ်ကြည်ရေးကိုရှေးရှု၍ အပြန်အလှန်နားလည် မှုဖြင့် ဆက်လက်ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်သွားရန် နှစ်ဖက်အမြင်များကို ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။
အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး နှင့်အတူ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးဝင်းရှိန် နှင့် တာဝန်ရှိသူများတက်ရောက်ခဲ့ကြကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။